ကယ်လိုရီကောင်တာနှင့်အတူကျန်းမာရေး & Fitness Tracker | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » ကယ်လိုရီကောင်တာနှင့်အတူကျန်းမာရေး & Fitness Tracker
ကယ်လိုရီကောင်တာ APK ကိုနှင့်အတူကျန်းမာရေး & Fitness Tracker
ကနျြးမာရေး Infinity, သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကိုယ်အလေးချိန်, ပိုကောင်းတဲ့အစားအစာရွေးချယ်မှုအောင် & fit သငျသညျစောငျ့ရှောကျကူညီပေးသည်တစ်ခုအားလုံးအတွက်တဦးတည်းကျန်းမာရေး & ကြံ့ခိုင်ရေး tracker ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ကျန်းမာရေး Infinity ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးကျန်းမာရေး & Fitness App ဖြစ်ပါတယ်?
ကိုယ်အလေးချိန် tracker, သတိပေးချက်များ, ကယ်လိုရီကောင်တာ, လှုပ်ရှားမှုများ, လေ့ကျင့်ခန်း & ယလေ့ကျင့်ခန်း tracker နှင့်အတူရေစားသုံးမှု, အိပ်ပျော်ခြင်း tracker, နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ, ခြေလှမ်းကောင်တာ (pedometer), ဆေးဝါးသတိပေးချက်နှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးတစ်ခုတည်း app ထဲမှာ။ ရိုးရှင်းစွာအထား, ကမ္ဘာပေါ်မှာဤကဲ့သို့သောအဘယ်သူမျှမကအခြားကျန်းမာရေး app ကိုအဲဒီမှာပါ!
ကနျြးမာရေး Infinity နှင့်အတူပိုမိုလုပ်ဆောင်:
•အဘို့အသတ်မှတ်မည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု, အလေးချိန်အမြတ်, Macronutrients, ကယ်လိုရီ, ရေစားသုံးမှု, အိပ်စက်ခြင်းအချိန် & နေ့စဉ်ခြေလှမ်းရေတွက်။
•သန်း2ကျော်အစားအစာများနှင့်အတူ built-in ကယ်လိုရီကောင်တာနှင့်အတူပိုကောင်းစားပါ။ ထုံးစံအစားအစာများ & အစားအစာများကိုဖန်တီးပါ။
• 100 လှုပ်ရှားမှုများ, လေ့ကျင့်ခန်း & လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျော် Track ။ သစ်တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုခြေရာခံများနှင့်လှုပ်ရှားမှု tracker တွင်သုံးပြီး real-time အတွက်မီးရှို့ကယ်လိုရီကိုကြည့်ပါ။
•ကိုမီးရှို့အရှိန်အဟုန်, လမ်းကြောင်း, အကွာအဝေး & ကယ်လိုရီများကဲ့သို့တိကျသောစာရင်းဇယားနှင့်အတူမှတ်တမ်း GPS စနစ်-based လှုပ်ရှားမှုများ။
•တိကျစွာမိုဘိုင်းရဲ့ကင်မရာနှင့် flash ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း Monitor ။ မဆိုအချိန်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို။
•ကြှနျုပျတို့အော်တိုအိပ် Tracker သုံးပြီးသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုအတွက်အာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင် အခြေခံ. အလုပ်လုပ်သည်။ ကိုယ်တိုင် start သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်မလိုအပ်ပါ!
•နောက်တဖန်တစ်ဦးဆေးလုံးမေ့လျော့ဘယ်တော့မှမ - ဆေးဝါးသတိပေးချက်ခြေရာခံနှင့်သင့် meds မှတ်မိဖို့ကဒါလွယ်ကူစေသည်။
• Built-in BMI Calculator ကို BMI ဇယားနှင့်သင်၏အမျိုးအစားစစျဆေးဖို့။
• Calculator စံပြအလေးချိန်, ခန္ဓာကိုယ်အဆီ, အဲဒါတွေက Metabolic Rate, ကြွက်သား, ပစ်မှတ်နှလုံးခုန်နှုန်း & အများကြီးပို။
•အသုံးပြုမှု Tags: သင့်ရဲ့ခြေရာခံဖို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့။ သင်တို့အလိုနှုန်းအဖြစ်ထုံးစံ tags များကိုဖန်တီးပါ။
• Google Fit အားချိတ်ဆက်ရန်နှင့်အခြား app များကိုအတူသင်၏ကျန်းမာရေးဒေတာထပ်တူပြုပါ။
•မက်ထရစ် & ဧကရာဇ်ယူနစ်နှစ်မျိုးလုံးထောက်ပံ့ပေးသည်။
•တခြား apps များရုံတစျခုအရာလုပ်နေတာစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာကျနော်တို့အဆက်မပြတ် features အသစ်ဖြည့်စွက်ပါတယ်။ ဟောင်းနွမ်းသွားသော apps များပေါ်တွင်သင်၏အဖိုးတန်ကျန်းမာရေး data တွေကိုစွန့်ခွာအန္တာရာယ်မထားပါနဲ့။
သဘာဝကျကျကိုယ်အလေးချိန်နဲ့မစိုက်အဆီကိုမီးမရှို့ - ကနျြးမာရေး Infinity သင်သည်သင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့နဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲကူညီခြင်းဖြင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုလွယ်ကူစေသည်။
ထိုသို့လည်းသက်သေပြနေပါသည်! လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် Fitter ရဖို့ကနျြးမာရေး Infinity ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
တွန်းအားပေး-ups, ဆွဲထုတ်-ups, ထိုင်-ups & ကီထိုင်လေ့ကျင့်ခန်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူရီးရဲလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာ။
တစ်ခုချင်းစီကိုစိန်ခေါ်ဘို့3Levels နဲ့။ အဘယ်သူမျှမလက်စွဲစာအုပ် input ကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်းအတွက်အာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင် အခြေခံ. အကျင့်ကိုကျင့်။
24 /7အဆင့်ကောင်တာ (pedometer):
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ခြေလှမ်းရေတွက်ကိုခြေရာခံ။ အဆိုပါဘောင်းဘီအိတ်ကပ်, လက်သို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီအတွင်းကမိုဘိုင်းထားပါ။
ဘက်ထရီစားသုံးမှုလျှော့ချရန် 4.4 + Device များအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲခြေလှမ်း detector (pedometer) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
ခြေလှမ်း detector မရှိဘဲထုတ်ကုန်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန် sensor-Fusion / Accelerometer အခြေစိုက် algorithms ။
ဆက်သွယ်ရန် - Google ရဲ့သင်္ကေတပြ-In ။
ကင်မရာ - သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာပါ။
တည်နေရာ - Track GPS စနစ်အခြေပြုလှုပ်ရှားမှုများ။
သိုလှောင်ခြင်း - ဖုန်းကိုသိုလှောင်မှုမှဇယား Save ။
အစာရှောင်ခြင်း & အလွယ်တကူအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုပါသလား?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပြကြိုးစားပါ။ ဒါဟာသင် 30 ရက်ပေါင်းထက်လျော့နည်းအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီ AI အနေဖြင့်စွမ်းအင်သုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစားအသောက်နည်းပြဖြစ်ပါတယ်။
•သင့်ကျန်းမာရေးကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရတဲ့သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေး-related ပြဿနာတွေကုသမှုအတွက်အစားထိုးဖြစ်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်။
• GPS စနစ်ပါမြေပုံလှုပ်ရှားမှုသာကို run & စက်ဘီး, လျှောက်လှမ်းခြင်းထောက်ခံပါတယ်။
• Push ကို-ups, Pull-ups, & ကီထိုင်-ups ထိုင်နေ - မရရှိနိုင်ပါစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်၏3အဆင့်ဆင့်။
•တချို့က features တွေ PRO access ကိုလိုအပ်သည်။
•ဘားကုဒ် Scanner ကယ်လိုရီကောင်တာနှင့်အတူသုံးစွဲဖို့ရရှိနိုင်
•သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာရှိပါက, ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ရပါ - feedback.droidinfinity@gmail.com
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - help.droidinfinity.xyz/articles/7906-privacy-policy
တို့က♥နှင့်ဖွဲ့ Droid Infinity!
Google ကြံ့ခိုင်မှုချိတ်ဆက်ပါ။ (ခြေလှမ်းများ မှလွဲ. )
တိုးတက်နှလုံးခုန်နှုန်း algorithm ကို။
ကယ်လိုရီကောင်တာနှင့်အတူကျန်းမာရေး & Fitness Tracker
4.48 ကို MB